गीत संगीत नशा हो यसबाट अलग हुन सक्दिनँ : गायिका कल्पना – Enepal Khabar
गीत संगीत नशा हो यसबाट अलग हुन सक्दिनँ : गायिका कल्पना
साँगितिक क्षेत्रमा लागिरहेकी र पछिल्लो समयमा चर्चा बटुल्दै गरेकी गायिका कल्पना कुशुमले अनिल खत्री संग सांगितिक क्षेत्रका तिता मिठा कुराकानी ।
-हजुर धन्यवाद !
-यस्तै हो सधै झैँ स्कुल तथा कलेजमा पढाउछु खालि समयमा साँगितिक कार्यक्रमहरुमा जान्छु विशेष भन्नु पर्दा आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त छु ।
-मेरो साँगितिक यात्रा २०७१ सालबाट सुरु भएको हो । मलाई संगीत सानैदेखि नै मन पर्दथ्यो पछि सङ्गीत कक्षा लिन थालेपछी झन मोहनी नै लगायो संगीतले । अहिले पनि निरन्तर सङ्गीत कक्षा लिईरहेकी छु ।
-गायन क्षेत्रमा लागेर धेरै खुसी छु । किनकि मलाई संगीतले बाच्न सिकायो, यसले थप उर्जा पनि दिएको छ । म खाली समयमा सधै संगितमै हुन्छु गितहरु गुनगुनाउन मनपर्छ । साथै म आधुनिक सगै लोक गीतमा बढी रुची छ, तर गाउन र सुन्न सबै किसिमका नेपाली गित सङ्गीत मन पर्छ ।
-हजुर मैले सन्देस मुलक गीतहरु बढी गाउने गर्छु । शब्द मन परेमा गाउछु जुन पायो त्यहि शब्द गाउन अप्ठ्यारो लाग्छ । गीत संगीतले फरम स्वाद फरक सन्देस दिनुपर्छ भन्ने सोच ममा सधै रहन्छ । त्यसैले सकरात्मक सोच सकरात्मक उर्जा प्रदान गर्ने गायिकाको रुपमा लिनुहुनुन्छ जस्तो लाग्छ ।
-मेरो पहिलो एल्वम भमरा हो । उक्त एल्बमले बजारमा राम्रै चर्चा पायो, समग्रमा भमरा एल्वम राम्रो रह्यो र मलाई साँगितिक यात्रामा अगाडी बढ्नका लागि प्रेरीत गरायो । त्यस पछी तीजमा लेहंगा लगाउछु नामक तिज गित निकाले त्यो गित निकै नै चर्चित भयो । सोहि गितले मलाई अवार्ड समेत जितायो । त्यपछी गतवर्षको तीजमा पनि शिवजीको दर्शन नामक तिज गित धेरैले मन पार्नु भयो र अहिले रानी चरी तिजगित निकालेको छु र यो गित पनि यतिखेर चर्चामा रहेको छ ।
-म खास शिक्षा क्षेत्रको मान्छे हु शिक्षा संगै संगीतलाई पनि निरन्तरता दिदै आगामी दिनमा एउटा राम्रो कलाकार बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढी रहेकी छु । भविष्यमा कलाकार मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्ने योजनामा छु । गीत संगीत नशा हो म यसबाट अलग हुन सक्दीन् ।
-मलाई गायन क्षेत्रमा तारीफ र सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताहरुलाई हृदय देखि नै धन्यवाद दिन चाहान्छु । आगामी दिनमा निरन्तर माया, सहयोग र सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु । साथै मलाई गाली गर्ने दर्शक श्रोताहरुको लागि तपाईहरु अझै गाली गर्नुहोस कुरा काट्दै जानुहोस तर म भने अझ बलियो बन्दै जान्छु हजुरहरूको गाली र नकारात्मक सोचाइले भन्न चाहान्छु ।
-पढाईको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा मैले मास्टर डिग्री सम्म अध्यन गरेकी छु । मेरो श्रीमानले संगीत कक्षामा भर्ना गरिदिनु भयो । ततपश्चात सङ्गीत क्षेत्र निरन्तर लागि रहेको छु । मलाई यहाँसम्म ल्याई पुराउने प्रेरणाको श्रोत नै मेरो श्रीमान र घर परिवारका सबै सदस्यहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ ।
-यस क्षेत्रमा म अझै नयाँ नै भएकोले होला विदेशबाट त्यति कार्यक्रमका लागि अफर आउने गरेको छैन तर हामी तपाइलाई हाम्रो कार्यक्रममा बोलाउछौ भन्ने धेरै हुनुहुन्छ ।
-आदरणीय दर्शक श्रोताहरुले मैले बजारमा पस्किएका गितहरु सुनिदिनुहोस माया गरिदिनुहोस, राम्रो लाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भनिदिहोस तपाईहरुको माया, सहयोग र सल्लाह सुझाव नै मेरो लागि थप हौसला हुनेछ भन्न चाहान्छु । साथै पाठक वर्गहरुलाई पनि सम्झन चाहान्छु । धन्यवाद !
१० श्रावण २०७४, मंगलवार १६:०४ मा प्रकाशित